A na-ahụ Xiaomi Mi MIX 4 na Geekbench na Snapdragon 865 Plus | Gam akporosis
N'afọ a, anyị ga-anata Mi MIX 4 na Xiaomi, ọnụ ahịa ọzọ dị elu nke ga-aga n'ihu n'ọkwa n'elu pọtụfoliyo onye nrụpụta China, n'ihe gbasara arụmọrụ. Anyị na-atụ anya ya n'ihi na ọ ga-enwe Qualcomm si Snapdragon 865 Plus, dị ka ihe Geekbench benchmark gosipụtara na ndepụta nyocha kachasị ọhụrụ ya.
Ọ bụ ezie na ekwuru na a gaghị ewepụta chipset ahụ e kwuru n'elu, Geekbench na-emegide nke a. Na tebụl nke smartphone a na-eche ogologo oge ị nwere ike ịhụ otú e si kpọọ chipset ọhụrụ dị elu n'ụzọ doro anya.
Kedu ihe Geekbench kwuru banyere Mi MIX 4?
Xiaomi Mi MIX 4 na Snapdragon 865 Plus na Geekbench
Ihe mbụ na nyocha usoro nyocha bụ arụmọrụ nke ama a na nọmba. Akara nke 922 na-enweta na ngalaba otu isi, ebe ọnụ ọgụgụ ahụ rutere na 3,320 isi na ngalaba ọtụtụ isi. Onu ogugu a di elu karie nke ndi nke a nyere Ogbe 865.
Ihe nlere anya na-akpọ Mi MIX 4 aha, yabụ enweghị ajụjụ banyere ịdị adị ya. Ọ na-akọwa na OS na-agba ọsọ usoro a bụ gam akporo 10; anyị tụrụ anya ọ dịghị ihe ọzọ ugbu a. Dịka akụkụ nke nbepu anyị, ị ga-ahụ onwe gị nke ọma na ụdị MIUI 11 kachasị ọhụrụ wee tozuo oke ịnata MIUI 12 n'oge na-adịghị anya.
Ndepụta ahụ na-ekpughe nke ahụ ume ọhụrụ nke Snapdragon 865 Plus bụ 2.96 GHz, na-erughị 3 GHz. A na-akọwapụta ihe nhazi ahụ dị ka isi nke isi asatọ nwere oghere ARM. Agbanyeghị, ụbọchị ole na ole gara aga, isi ahịa na Meizu Teknụzụ gosipụtara na agaghị enwe Snapdragon 865 Plus mobile platform n'afọ a, nke na-ahapụ ozi a ntakịrị obi abụọ. Ọ ka ga-ahụ ma ọ bụrụ na anyị ga-enweta ndozi overclocking site na SD865 na ọnwa ndị na-abịanụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A na-ahụ Xiaomi Mi MIX 4 na Geekbench na Snapdragon 865 Plus
[Vidiyo] Otu esi eji ihe mmado Telegram gi na WhatsApp